Kii sariirta ku jiifsada oo si qumman u socda ayaa isaga kor u qaadi doona. "Dhimista waxay timaaddaa marka ay fursada la kulmaan diyaarinta" ... Run ama Been?
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 18, 2018 00: 40 No Comments
Ku guuleysiga noloshu maahan hadiyad, laakiin waa xulasho run noqota oo kaliya markaad aqbasho masuuliyadaada.
Haddii xigmaddii Eebbe aasaasey dhulka iyo caqligiisa oo cirka aasaasay, markaa xigmaddiisa adiga kugu jirta waxay awood u leedahay inay abuurto adduun guul iyo guul ... Waa macquul.
Mucjiso maaha mid aan suurtagal ahayn xaalado mucjiso ah. Baro in aad aragto dhibaatooyinka ku yimaada sida fursadaha mucjisooyinka ah ee Noloshu kuu fidiso.
Waa wakhti aad ku qaadato muuqaalka aragtidaada nolosha, ujeedooyinkaaga, istaraatiijiyadaada, rajooyinkaaga. Joodhka nolosha ayaa mararka qaarkood ku geyn kara meel kasta. Ilaah wuxuu ku siin doonaa macne aad ku gaarto himilooyinkaaga oo wuxuu kaa illaawinayaa wixii aad soo martay. Wax walba wuu cusboonaysiiyaa.
Ma jiro kor u kac aan samaynaynin cabsi (Ma aha) dhicitaan ... Is ilaali naftaada & Wanaagsan toddobaad Dhamaan dadka oo dhan!
Nov29 10: 20